ओली सरकारले सुनियोजित रुपमा पक्राउ गर्‍यो, देशैभरि प्रतिवाद हुन्छ : रामचन्द्र पौडेल – Sajha Achham
२०७८ माघ ३ सोमबार ०८ बजे २८ मिनेट
१७ मंसिर, पोखरा । ब्यास नगरपालिकाको बुल्दी खोलामा बसेको पुल उद्घाटनका लागि जाने क्रममा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बुधबार पक्राउ परे ।
मंगलबारदेखि गृह जिल्लामा रहेका पौडेलले व्यास नगरपालिका र ऋषिङ गाउँपालिका जोड्न सेती नदीमाथि बनेको पक्की पुल उद्घाटन गरेका थिए । तर ब्यास नगरपालिकामा वडा नम्बर १, १० र ११ जोड्ने तालघरे दुम्सीचौर सडकको बुल्दीखोला पुल उद्घाटन गर्न नपाउँदै विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो ।
संघीय सरकारको बजेटमा बनेको पुल कसले उद्घाटन गर्ने भन्नेमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसबचि विवाद भएपछि स्थानीय प्रशासनले झडप हुने सम्भावना देखिएको भन्दै निषेधाज्ञा नै गर्‍यो । तर निषेधाज्ञालाई खारेज गर्छु भन्दै र्‍यालीसहित पुल उद्घाटन गर्न हिँडेका पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर साँझ साढे ५ बजे छाडेको छ ।
प्रदेश सांसद सरिता गुरुङ, तनहुँ कांग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष जीतप्रकाश आले लगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । झडपका क्रममा नेता रामचन्द्र पोखरेल, कांग्रेस तनहुँका सचिव लक्ष्मी आचार्यलगायत केही सामान्य घाइते भएका छन् ।
नेताहरुमाथि भएको धरपकडको विरोधमा तरुण दलका कार्यकर्ताले जिप्रका अगाडि प्रदर्शन पनि गरे ।
प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका वरिष्ठ नेता पौडेलले भने आफूलाई सुनियोजित ढंगले नै पक्राउ गरिएको बताएका छन् । र, देशैभरि त्यसको प्रतिकार हुने पौडेलले बताएका छन् । प्रस्तुत छ, पौडेलसँग अमृत सुवेदीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
तर, प्रशासनले त कोरोनाको जोखिमका बेला तपाईले संयौं जनामा जुलुस निकालेर निषेधाज्ञा तोड्ने भयो भनेको छ नि ?
सरकारले सुनियोजित ढंगले नै पक्राउ गर्‍यो भन्ने हो तपाईंको दाबी हो ?
यो परिवर्तनमा केपी ओलीको कुनै हात छैन । तस्करहरुलाई बोकेर पैसाका बलमा केपी ओली नेतृत्वले बहुमत ल्यायो । अहिले यिनैका इसारामा यो काम भइरहेको छ । यो लोकतन्त्रमाथि प्रहार हो, यसको प्रतिवाद देशैभरि हुन्छ ।